Wasiirka Maaliyadda XFS oo u hambalyeeyay Madaxweynaha Cusub ee Bangiga Aduunka – Radio Daljir
Abriil 9, 2019 3:25 g 0
Guddiga Agaasinka Bangiga Aduunka ayaa waraysi ay la yeesheen kadib u doortay inuu noqdo Malpass Madaxweynaha Bangiga Aduunka iyaga oo u rajeeyay inuu hirgaliyo howlaha iyo himilooyinka Bangiga.
Mr Malpass muddo xileedkiisa waxaa ka bilaabanya maanta oo ku beegan 9 bisha April.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ugu hambalyeeyay xilka loo doortay David Malpass Madaxweynaha cusub ee Bangiga Aduunka.
Wasiir Beyle ayaa yirri “Bangiga aduunku door muhiim ah ayuu ka qaadanayaa howlaha hormarinta iyo dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya waxaan rajeynayaa hormar iyo xoojinta xiriir adag ee innaga dhaxeeya Bangiga aduunka waqtigaan oo aan ku jirno dib u habeynta.
Bankiga Aduunka ayaa sanadkii tagay ee 2018 Soomaaliya ugu deeqay 140 oo doolar oo lagu abaal mariyay Soomaaliya guulaha ay ka gaartay wadahadalka deyn cafimnta sharuudihii ku xernaa iyo hagaajinta maamulka Maaliyadda.
David R. Malpass Madaxweynaha Cusub ee Bangiga aduunka waxa uu dhashay 1956 waa dhaqaalyahan Mareykan ah oo muddo ka soo shaqeeyay hey’adaha dhaqaalaha dalkiisa iyo kuwa caalami ah.
Madaxweyne Farmaajo oo qado sharaf u sameyeey Madaxweynaha koonfur galbeed (Sawiro)
Maamulka degmadda Caluula oo ka hadlay Abaaraha kajira degmadda (dhegayso)